पल्मोनरी edema - तरल पदार्थ accumulates र अंगहरु देखा जसमा सर्त। यो प्रक्रिया मा फोक्सो अक्सर धेरै दबाव जहाजहरु मा उत्पन्न भएको छ भन्ने तथ्यलाई कारण छ। साथै, फोक्सोमा मा तरल पदार्थ अक्सर पर्याप्त तथ्यलाई फलस्वरूप संचित छ रगत बस पर्याप्त प्रोटिन छैन, वा यसलाई पर्याप्त पानी आयोजित छैन।
शब्द "पल्मोनरी edema" विशेषज्ञहरु द्वारा प्रयोग हुने धेरै वर्ष को लागि थाले। सामान्यतया यो अभिव्यक्ति यो रोग को विशेषता हो कि लक्षण को एक विशाल श्रेणी जोडती। यो तरल पदार्थ कारण यो बस तथाकथित रगत भित्र आयोजित छैन भन्ने तथ्यलाई गर्न फोक्सो मा accumulates। यो शरीर को संरचनात्मक एकाइ दृढ यसलाई जस्तै अरूलाई बंधुआ पातलो-पर्खालहरु sacs capillaries को नेटवर्क छ जो alveoli छ, कि टिप्पण लायक छ। यी नै alveoli र बीच प्रत्येक जीव ग्याँस विनिमय भनिने प्रक्रिया को लागि महत्वपूर्ण छ। कार्बन डाइअक्साइड - फलस्वरूप, आफ्नो रगत महत्त्वपूर्ण अक्सिजन र प्रकाश बग्छ। यो सबै बाहेक, यो यस्तो प्रक्रिया alveoli पर्खालहरु धेरै पातलो हुन्, चाँडै पर्याप्त फोक्सो कक्षहरू बीच ठाँउ लिन्छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। तर, यो कारक अक्सर निर्णायक बन्नेछ। यो कुरा पातलो छ पर्खाल सेल फोक्सो क्षति श्वसन प्रणाली अंगहरु मा फलस्वरूप, तिनीहरूलाई र योगदान, तरल पदार्थ को संग्रह।
को फोक्सो मा तरल , वा रूपमा सामान्यतः रोग, भनिन्छ तथाकथित alveoli हावा भरिएको छैनन् जब पल्मोनरी edema उत्पन्न हुन्छ। बरु, ग्याँस तिनीहरूलाई छिटो अंगहरु को रक्त नली मा infiltrates जो तरल को ठूलो रकम संचित छ। के फलस्वरूप हुन्छ? अक्सर व्यक्ति साँस संग गम्भीर समस्या, ग्याँस विनिमय छ। Anoxia वा hypoxia पनि मानिन्छ पल्मोनरी edema एक लक्षण। एकदम अक्सर, विशेषज्ञहरु जस्तै सुनिन्छ जो विरामीहरु को निदान, मा उल्लेख "को फोक्सोमा पानी।" यस मामला मा उपचार जहाजहरु आफूलाई मा सिधै बाध्यकारी normalization दबाव समावेश छ। साथै, यस्तो उपचार मा दबाब कम, र थप, alveolar पर्खालहरु विनाश गर्न नेतृत्व जो विकार को सुधार, उद्देश्य हुनेछ। एकदम अक्सर, रोगी दबाब stabilizes सम्म nitroglycerine गर्न intravenously प्रबन्ध छ।
पल्मोनरी भीड तरल पदार्थ धेरै कारक कारण हुन सक्छ। हृदय - उदाहरणका लागि, एक व्यक्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू एक को कार्य उल्लङ्घनको हुन सक्छ। तथ्यलाई गर्न वाल्व शरीर, हृदय आक्रमण, हृदय को मांसपेशी रोग को Malformations, र थप सुराकी फेफडों मा संचित तरल पदार्थ छ। माथिको बाहेक, यस्तै रोग अक्सर तथाकथित दुःखको सिंड्रोम हुन्छ। ARDS मानव शरीर अवस्था धेरै खतरनाक छ। यो अक्सर गर्न क्षति वा प्रणाली प्रकार को lightest, वा गम्भीर संक्रमण कारण छ। यो सूची toxins विषाक्तता, विकिरण क्षति अंगहरु वा गम्भीर पल्मोनरी संक्रमण समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया, जब त्यहाँ दुःखको सिंड्रोम र छेडछाड alveolar पर्खालहरु को विनाश छ। फलस्वरूप, तिनीहरूले त्यसपछि तरल, पल्मोनरी edema गर्न प्रमुख प्रवेश गर्छ।
फेफडों मा एक असामान्यता अर्को कारण गुर्दे विफलता छ। यी अधिकारीहरूले शरीर देखि अतिरिक्त तरल पदार्थ को हटाउनका लागि जिम्मेवार छन् भन्ने तथ्यलाई। यदि यो उत्पन्न गर्दैन, दबाव रक्त वाहिकाओं मा, रगतको मात्रा निरन्तर परिसंचारी रूपमा, एकदम बस एकदम बढ्ने वृद्धि। फेफडों मा तरल पदार्थ अवधारणा को कारण ठ्याक्कै छ भने, रोगी मुख्यतया dialysis तोकिएको छ।
तीव्र कोरोनरी अपर्याप्तता: तुरुन्त आफ्नो हृदय सुरक्षित!
भाँचिएको हात छ कि केही जानकारी
Zayed आफ्नो मुखको कुना मा बच्चा: कारणहरू र उपचार
किन खाली पेट मा तालिम छैन
ओवन मा ब्रीम कसरी Bake गर्न?
गुग्नेइनिम संग्रहालय। को न्यूयोर्क संग्रहालय
परम्परा र चलन: एक मुसलमान कसरी मुर्दा गाड्नु गर्न?
SYM ब्वाँसो टी 2: प्राविधिक विनिर्देशों र सुविधाहरू
10 रूबलहरू कसरी हेर्ने: 100 वर्षको लागि एक बिल
चाखलाग्दो कुरा, र किन हामी अंडरवियर चाहिन्छ?
जिग "परी"। mormyshkas, समीक्षा beznasadochnyh दर्जा